Sekoly alahady Archives - FJKM Québec - Canada
Home > Filazàna samihafa > Sekoly alahady
Hits: 425Faly dia faly tokoa ny ankizy nigorisagorisa tetsy amin’ny Centre de plein air de Lévis. Isaorana ny Tompo noho izao hafaliana omeny anay izao ! Hafaliana foana ny anay ankizy
2 Febroary 2019 – Glissade Sampana Sekoly Alahady
4 février 2019 by Bako Raveloson
Hits: 476Misaotra ny Tompo fa tontosa soa aman-tsara ny sortie glissade izay niarahana tamin’ny Sampana Sekoly Alahady ny Sabotsy 2 Febroary 2019 lasa teo. Hafaliana tokoa moa izany fiarahanay izany … Ireo ny sary mitantara izany !
Hits: 559“Mba ho saina iray sy vava iray no hiarahanareo mankalaza an’Andriamanitra”. Rom 15,6
Hits: 442« Avy amin’ ny vavan’ny ankizy madinika sy ny zaza minono no nanamboaranao fiderana. » Sal. 8,2
Fiavoahana an-tsaha Sampana Sekoly alahady – 2018
19 juillet 2018 by Bako Raveloson
Hits: 470« Avy amin’ ny vavan’ny ankizy madinika sy ny zaza minono no nanamboaranao fiderana. » Sal. 8,2 Misaotra an’Andriamanitra lehibe nohon’ny fitsimbinany ka nahavitàna ny taom-pianarana 2017-2018 ny Sampana Sekoly Alahady. Misaotra ny mpianatra, ny Ray aman-dReny ary ny mpampianatra nahatontosa izany. Misaotra ny Fiangonana manontolo koa nanotrona ny Sampana nandritra iny taona iny. Ny fivoahana an-tsaha tamin’ny […]
Sekoly alahady : répétition voka-dehibe
7 mai 2018 by Bako Raveloson
Hits: 251Prochaine répétition du voka-dehibe : Samedi 12 mai, 17 h à 18h30, chezNofy sy Mamitiana Dimanche 13 mai, 14h45, Kirkhall
17 febroary 2018 – Glissade à Lobtinière
20 février 2018 by Bako Raveloson
Hits: 322Soa ny fiarahantsika ! Tanteraka soa aman-tsara ny Asabotsy 17 Febroary teo ny fivoahana “Glissade” niaraka tamin’ny Sekoly Alahady … Tsara be ny andro, teo amin’ny -5 degrés teo “fotsiny” … Faly daholo na ny lehibe na ny kely. Amin’ny herintaona indray ô ! Jereo anie ny hafalianay e !